उफ ! गर्मीले तातेको मधेश – www.janabato.com
Latest Taja-update TOP STORIES फिचर
उफ ! गर्मीले तातेको मधेश
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०८:१६ June 12, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । मधेश गर्मीले तातेको छ । उखरमाउलो गर्मीका कारण मधेशको जनजीवन असाध्यै प्रभावित भएको छ । मनसुनको आगमन सहित पहाड भेगतिर छिटपुट बर्षा भएपनि मधेशमा अझै पानी पर्न सकेको छैन ।
अत्यधिक गर्मीका कारण मधेशको जनजीवन प्रभावित भएको छ । रुपन्देहीमा बुटवल तिनाउ किनारामा बस्ने सुकुम्बासीहरु घरको टिन तातेर आगोजस्तै घाममा जल्ल बाध्य छन् । बृद्ध र बालबालिकाहरुका लागी गर्मी मौसम असाध्यै कष्टसाध्य भएको छ । रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङको तापक्रम अहिले ४० डिग्रीको हाराहारीमा पुगेको छ ।
विद्यालयहरु प्राय बन्द भएका छन् । गर्मीसंगै घरी–घरी लोडसेडिङका कारण झनै सास्ती भइरहेको छ । केही दिन गर्मी अत्यधिक बढेपछि उद्योगधण्डाहरुमा काम गर्ने मजदुर, खेतमा काम गर्ने किसान र सडक बालबालिकहरुलाई सवैभन्दा गाह्रो भइरहेको छ ।
गर्मी छल्नका लागी केही मान्छेहरु पहाडतिर उक्लिएका छन् भने धेरैजसो मान्छेहरु गर्मी सहन बाध्य छन् । पछिल्लो समय आइसक्रिम, कुल्फी र चिसो पेय पदार्थ अत्यधिक विकिरहेको व्यापारीहरु बताउँछन् । गर्मीसंगै बालबालिका तथा बृद्धहरुमा विरामी हुने समस्या बढेको छ । विरामीका कारण बुटवलका हस्पिटलहरु भीडभाड भएका छन् ।
गर्मीको समयमा अनावश्यक बाहिर ननिस्कन डाक्टरहरुले सल्लाह दिइरहेका छन् । साथै खानपीन र जीवनशैलीमा ध्यानदिनु पर्ने समेत उनीहरु बताइरहेका छन् ।
← ट्रम्प‍-किम भेट: संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
८३ बर्षीय गोपीलाल सापकोटाको घर नेकपाले बनाइदियो →
देउवाले भने,– ‘अझै म ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्छु, कम्युनिष्टले भनेर हुन्छ ?’
३० कार्तिक २०७४, बिहीबार ०६:४९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on देउवाले भने,– ‘अझै म ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्छु, कम्युनिष्टले भनेर हुन्छ ?’
एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तनः प्याज
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०४:२५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तनः प्याज
सिर्जनशील विद्यार्थी समूहको नयाँ कार्यसमिति चयन
१४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:५८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on सिर्जनशील विद्यार्थी समूहको नयाँ कार्यसमिति चयन